अन्तर्वार्ता मञ्जरी बलामी
राजेश के.सी. (वडा अध्यक्ष)
मकवानपुर थाहा नगरपालिकामा जनप्रतिनीधि निर्वाचित भई जनताको सेवाामा खटिएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा जनप्रतिनीधिहरुले विविध कार्य गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, थाहा नगरपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष राजेश के.सी.सँग विकास संवाददाता मञ्जरी बलामीले गरेको कुराकानीः
वर्ष सकिसकेको छ, अब बाँकी दिनलाई तपाईको योजना के छ?
अबको दिनलाई पनि योजनाहरु भनेको बाटोघाटो नै छ । भौतिक पुर्वाधार नै छ । नगरपालिकाले धेरै बजेट बिनियोजन गरेको छैन । शिक्षा स्वास्थ्य लगायत अन्य पनि छन तर बिशेष गरी भौतिक संरचना नै हाम्रो मुख्य योजनाहरु हुन् ।
तपाईको वडामा महिला र पुरुष बिचमा असमान ज्यालादर छ, त्यो बिषय तपाइले ब्यवहारमा कत्तिको पाउनु भएको छ ?
यो बिषय अहिले १ सयमा भए पनि फरक छ, धेरै फरक छैन । खेतीको काममा ५ सय रुपैया महिलाले लिन्छ भने ६ सय रुपैया पुरुषले लिन्छन् । मैले मेरै खेतीको काममा लगाउँदा पनि महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिएको छु । मेरै काम गर्ने बेलामा असमान ज्याला दिँदा महिलाहरुले समातेनन्, ५ सय भै सक्यो अहिले समान दिनुपर्छ भनेपछि साच्चै हो कि मलाई मात्र भनेपछि होइन होइन हामीले अन्त पनि समान नै लिन्छौ भनेपछि मैले पनि दिएँ ।
पहिला भन्दा विभेदको दर बढेको हो की घटेको हो भन्ने लाग्छ ?
अहिले पनि असमान नै छ, तर पहिला भन्दा अलि घट्दै गएको हो ।
यो बिषयलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ कि छैन ?
यो बिषयलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यो बिषयलाई ब्यक्तिगतले गरेर पनि हुँदैन । सामुहिक रुपमा नै जानु पर्छ । मैले देखेको त पुरुष भन्दा महिलाले बढी काम गर्छन । अहिले नै महिलालाई समान ज्याला दिँदा पनि फरक पर्दैन । पुरुषलाई पनि ५ सय मै झार्दिने बरु ।
समानता ल्याउनलाई प्रयास चाइ कस्तो रहन्छ?
मेरो वडामा त्यस्तो खास त छैन । प्राय आफ्नै काम गर्छन । उनीहरु जति दिए पनि ‘माइन्ड’ गर्दैनन् । उनीहरु आन्दोलन गर्न पनि जादैनन् । तर यसलाई अभियान कै रुपमा पनि लानु पर्छ । पुरुष र महिला दुबैको ज्याला बराबर चाइ हुनैपर्छ भन्ने छ । अभियान भन्दा पनि बराबरीमा चाइ लानै पर्छ । पुरुष भन्दा महिलाले धेरै काम गरिरहेको छ, अब हामीले देखिरहेकै छौँ ।
यो बराबरीको अवस्थामा पुग्न मुख्य भुमिका कस्को हुनु पर्छ ?
यसमा मुख्य भुमिका त जनता कै हो । भनम् न मैले काम लगाएपछि उसले समान ज्याल दिनु्पर्छ भन्ने ज्ञान हुुनु पर्छ । नागरिक समाज, अगुवा, हामी जनप्रतिनिधि र सबैले श्रमको मुल्यलाई चाई बिभेद गर्नुहुन्न बराबरी गर्नु गर्नु पर्छ ।
अब अर्को प्रसंग, तपाइको वडामा पर्यटन विकासको योजना के छ ?
– कृषि र पर्यटन भन्ने हाम्रो नारा मात्र छ । हुनत अहिले हामीले नगरपालिकामा छुट्याएको रकम कृषि र पर्यटनलाई न्युन नै छ, नारा चाई लिइरहेका छौँ तर बजेटमा चाई कम छुट्याका छौं । नगरपालिकामा छुट्याइएको छ तर वडा वडामा नभएको हुनाले खास योजना छैन । हाम्रोमा बिभिन्न धार्मिक स्थलहरु पनि छन्, इन्द्रायणी, पाण्डुकेश्वर, लयागत पुराना मठमन्दिरहरु पनि छन् । र, पुराना धिमेबाजाहरु पनि छन्, यिनीहरुलाई पनि जगेर्ना गर्न गतबर्ष पनि अलिअलि बजेट छुट्याएको थिएँ । अब यो बर्ष पनि अलि अलि छुट्टिन्छ ।
रुपचन्द्रं विष्टद्धारा निर्मित विकास घर पनि तपाइ कै वडामा पर्छ, रुपचन्द्र सँग सम्बन्धित सामाग्रीहरु, संकेत, एतिहाँस भवन लगायत जे जति छन् त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि संग्राहलयको निर्माण गर्न सके पनि पर्यटन प्रवद्र्धन होला नि ?
यो एकदम आवश्यक कुरा हो , उहाँको भेषभुषा, सवारी साधन, लगायत विभिन्न बस्तुहरुलाई संरक्षणको लागि वडा नं ४ मा नगरपालिका र प्रदेशकै बजेटमा थाहा स्मारक भवन पनि बनि सकेको छ र त्यहाँ स्मारक बनाउने तयारीमा छौँ, पहल पनि भै रहेको छ । यो पर्यटन भित्र्याउने र आम्दानी गर्ने एउटा स्रोत हो । यसो अब पछिका पुस्ताले कस्तो थियो भन्ने देख्न पाउँछन । यो अनिवार्य गर्नैपर्छ । यसको लागि वडा–वडामा बजेट छुट्याएर सम्भब त छैन । यसमा नगरपालिका, प्रदेश र संघसँग नै आर्थिक माग गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यो बिषय अगाडी बढेको छ ।
थाहानगरले बीउ आलु उत्पादनका लागि प्रस्ताव–पत्र माग्यो, १० लाख उपलब्ध गराइने
थाहानगरमा किसान–२ परियोजनाले किसानलाई व्यवसायी बनाउँदै, व्यवसायिक बाख्रा पालनमा १००० परिवार आवद्ध
थाहानगरमा निःशुल्क बीमा शुरु, ३०० कडा रोगी तथा बिपन्नहरुको निःशुल्क बीमा गरिने
विद्युत समस्याबारे युवा संघ थाहानगरको ध्यानाकर्षण, पालुङ प्राधिकरणसँग छलफल
१३ कात्तिकमा थाहानगरमा टोपबहादुर रायमाझी आउने
थाहाको १२ वटै वडामा एमालेको अधिवेशन, सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन (अध्यक्षहरुको सूचीसहित)
सम्पर्क : ९८५५०७८९१०